Ciidamada Dowladda oo ku sii siqaya tuulada Shabellow ee Bacaadweyne | Dhacdo
Ciidamada Dowladda oo ku sii siqaya tuulada Shabellow ee Bacaadweyne
Ciidamada Dowladda oo kaashanaya kuwa Galmudug iyo dadka deegaanka ayaa ku sii siqaya tuulada Shabellow, oo 30km u jirta deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug.
Ciidamada ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray tuulada Xoosh oo ood wadaag la ah Shabellow, iyadoo illaa berrito ay suurtagal tahay in ciidamadu gaaraan Shabellow.
Ciidamada ku wajahan Shabellow ayaa wata gaadiidka dagaalka, iyagoona u muuqda kuwa si weyn isugu diyaariyay qabashada tuuladaasi.
Shabaabka ayaa daba-yaaqadii sanadkii hore ee 2020 bilaa dagaal kula wareegay gacan ku haynta tuulada Shabellow, ka dib markii dhawr jeer ay dadka deegaanka ku wada dagaalameen. Dadkii ku dhaqnaa Shabellow ayaana intooda badan isaga barakacay, muddadii ay Shabaabka ku sugnaayeen.
Galmudug ayaa Axadii ciidan badan gaysay deegaanka Bacaadweyne, waxayna kaga dhawaaqday guluf ka dhan ah maleeshiyada Al Shabaab.
Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi oo shir jaraa’id ku qabtay Bacaadweyne ayaa sheegay inaanay Janno oolin Bacaadweyne iyo guud ahaan Galmudug, balse uu yaalo halaagga kooxaha argagixisada.
“Waxaan kooxaha argagixisada leenahay meeshaan Janno ma taalo, Galmudug Janno ma taalo, Bacaadweyne Janno ma taalo ee halaagiina yaala, baqtigiinaa yaala, dhaawaciina iyo dhimashadiinaa taala.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Jannada Ilaahay boqol dariiqo oo kale oo lagu doortaa jirta, Janno Bacaadweyne iyo Galmudug laga soo raadinayo waxaan u maleynayaa inay tahay halaagiinii, dadkana inaad kala barataan iyo deegaanada.”
Wasiir Fiqi ayaa dhammaanba shacabka reer Galmudug ugu baaqay inay u wada istaaggaan dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab, ciidankana ay garab istaaggaan.